Nlekọta ugo na akọrọ maka nkịta: uru na ọghọm, ọnụahịa ndị ahịa, yana ndị na-ere ahịa kasị mma - Ụlọ, ụlọ - 2020
Ezi nchebe maka anụ ụlọ gị! Nyochaa ihe nko na ịkwado ọnye ego maka nkịta
Ihe otiti nke anụ ụlọ - ọgwụ nje ọbara - site n'oge ruo n'oge, n'ụzọ nkịtị na n'ụzọ ihe atụ, ha na-emebi ndụ nye ma nkịta ma ndị nwe ha.
Ihe ize ndụ ahụ abụghị nanị n'eziokwu ahụ na ha na-ebi na nkịta nkịta, ha na-arịa ọrịa dị iche iche. Ma ọ bụrụ na nwatakịrị nọ n'ụlọ ahụ, ọgụ megide fleas, akọrọ na ụmụ ahụhụ ndị ọzọ na-aghọ ihe metụtara ahụike nke ezinụlọ dum.
Otu n'ime ụzọ ndị kachasị enyere gị aka ichebe nsogbu akpụkpọ ụkwụ.
Kedu ka otu nkpu isi na-arụ ọrụ?
Ihe nke ngwugwu a dabeere na ojiji nke na-egbu egbu maka nsi ọjọọ, nke ọ na-emetụta. Ihe mejupụtara nke impregnation dị otú ahụ pụrụ ịdị iche. Ndabere nke omume ya nke na-agbasa ngwa ngwa n'ime ahu nkịta.
N'elu anụ, anụ ahụ na-ekpo ọkụ na nsi na ụmụ ahụhụ, ihe ahụ na-amalite ịbanye n'ime akpụkpọ nkịta ahụ, wee gbasaa site n'àkwà mmiri ahụ dị iche iche.
Ahụhụ ndị na-ata ka nkịta nwụọ. Ugbu a anya! Okwu - "bitten"Ma ọrụ nke onye nwe ahụ bụ iji kpochapụ nkịta ahụ ọ bụghị nanị banyere ọnụnọ nke ụmụ ahụhụ, kama ọ bụ nsị ha. Nke a pụtara na ọbụna na nkịta nkịta nọ n'ihe ize ndụ, ma ihe egwu maka ahụ ike ya ka dị.
Ihe niile dabere na nhọrọ ahụ! Nhọrọ kachasị mma ga-abụ ihe ngwongwo nke a na-agbanye n'ime ya, ya bụ, ọ ga-ewepụ ísì nke na-eme ka ụmụ ahụhụ kwụsị.
Ọ dịghị onye ọ bụla n'ime ha nwere mmemme ozugbo. Ọ na-emekarị ọdụ site na ọtụtụ ụbọchị (onye ọ bụla emeputa nwere ya oge). Nke a bụ eziokwu ahụ bụ na nsi ahụ ga-abanye n'anụ ahụ nke anụ ahụ ma gbasaa n'ime akpụkpọ ahụ niile.
Ya mere Ọ dị mkpa iji ebu ngwugwu mgbe nile, na-ewepụghị ya n'abalị, ma ọ bụ n'oge ịsa ahụ. Site n'ụzọ, ịsa ahụ, karịsịa na mbụ yi, kwesịrị ikwe.
Ihe na-arụ ọrụ na olu akwa ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị niile na-emepụta anaghị agafe ọnwa asatọ.
Ndị na-emepụta akwụkwọ, ndị mepụtara taa site na ndị nrụpụta dị iche iche, dị iche na ngwugwu nke ha jupụtara na, ya mere, na ihe ha mere. Na ngụkọta e nwere ụdị atọ:
ndị na-eme ka mmiri sie ike. A na-etinye ha na ụmụ ahụhụ, ọ bụ naanị ndị nkịta na-eto eto na-ahụ maka njedebe dị elu nke ihe ọjọọ ahụ;
ndu - na-abaghị uru, ma ọ dị oke nchedo maka anụmanụ ahụ. Ihe mejupụtara na-agụnye naanị mmanụ dị mkpa na ihe ọkụkụ. N'ihi ihe dị nro ha, ha na-adabara maka ojiji maka ụmụ puppies, ime ime na ọnụọgụ na ọrịa nkịta na-arịa ọrịa ma ọ bụ nkịta;
akwara ultrasound, dị oke ọnụ ma dị mma, ha nwere ike eyi na nkịta n'oge ọ bụla na ọnọdụ. Dị ka ndị na-azụ anụ ọhịa, n'agbanyeghị oke ọnụahịa ha, ha abaghị uru.
Ha bụ, ma eleghị anya, otu. Ihe nile dabere na onye nwe nkịta ahụ. Ọ bụrụ na ọ na-ege ntị n'anụ ahụ, mgbe ahụ, ọ gaghị emerụ ahụ site n'iji ngwugwu ahụ. Ma, ihe mbụ na mbụ.
Enweghị ike iji. Ọ na-etinye nkịta n'elu nkịta ma chefuo ya n'ime ọnwa ndị na-abịanụ ruo mgbe ọrụ ụgbọ okporo ígwè ahụ kwụsịrị.
Ọnụ ala. Ọ dị ala karịa ụda mmiri na ụmụ ahụhụ ndị ọzọ.
Nchebe dị ọcha. Ihe ndị ahụ na-abanye n'ime anụ nke nkịta ahụ, a pụghịkwa ịsacha ya, ajị ahụ adịghị ekpuchi arịa dị nro na uwe nke onye nwe ya, dị ka ọ bụ mgbe ị na-etinye nkedo ma ọ bụ mmanụ.
Omume zuru oke. Ihe na-egbu egbu na-eme ihe ọ bụla na-arịa ọbara.
Ikike iji mee ka ihe ọ na-eme ọ bụghị naanị ụmụ anụmanụ n'onwe ha, kamakwa ndị gbara ha gburugburu. Ọ bụ ekwesighi ihi ụra na-esote nkịta. Ogwu nwere ogige ndị na-adịghị mma, na ọ bụrụ na a tọhapụrụ ha na mbara igwe, nwere ike ịkpata mmeghachi omume na-adịghị mma n'ime mmadụ.
Nkịta ụlọ. Ọ na-apụ n'anya na ọnwa 1-2 na nkịta ka na-anọgide na ụmụ ahụhụ, nke na-amalite ịmị ya na mgbe ahụ nwụọ. Nsogbu bụ na onye nwe ya anaghị achọpụta oge a, ya mere, ọ gaghị ewere ihe ọ bụla.
Omume nke chal na-adịghị agabiga na-enweghị ọdịdị nke ahụ nkịta.. Nsi ahụ, nke na-ele anya na mbụ maka oke anụ ahụ, na-abanye n'ime ahụ ya. O nwere ike ime ka ihe na-adịte aka n'oge ọrịa nke akụkụ ahụ dị iche iche, nke onye na-elekọta ya anaghị akpakọrịta na nchịkọta ahụ.
Enweghi ike maka ndị nwe na ihe ize ndụ maka ụmụaka.. Na-asacha aka n'azụ mgbe ọ bụla kọntaktị na nkịta na-eyi akwa. Nwa na-achọ ịmata nwa nwere ike ịnwale nkịta ezé, na-eyi na nkịta ọ hụrụ n'anya. Ọ na-agwụkwa njọ. Nsi dị ize ndụ maka nwatakịrị ahụ, ọ nwere ike ịkpata mmeghachi omume siri ike, ruo n 'ọnyà na ọnwụ nke nsụhọ.
Ọ bụrụ na anụ ụlọ gị na-ebute fleas, akọrọ ma ọ bụ ụmụ ahụhụ ndị ọzọ, egbula ngwa ngwa tinye nkedo na ya. A ghaghị ibu ụzọ wepuchaa nri.
Mgbe ị na-etinye na akwa, jide n'aka na ọ gaghị adabara n'olu nke nkịta ahụ. A ghaghị inwe anya nke dịka 1.5 cm n'etiti ha.
Ụbọchị nke mbụ kwesịrị izere ogologo oge na-agagharị n'ime oké ọhịa, karịsịa ebe obere anyanwụ ma ọ bụ ikekwe kọntaktị nke nkịta na anụmanụ ndị ọzọ.
Ma ọ bụghị ya, mgbalị niile ị na-eme iji kpochapụ fleas na akọrọ ga-emebi.
Ekwela iwepu ehihie ma ọ bụ abalị, ma ọ bụghị ya, ihe ọ ga-eme ga-akwụsị. Chere maka igwu mmiri, karịsịa n'izu mbụ.
Dị ezigbo mkpa! Jiri nlezianya gụọ ma debe ntuziaka maka iji ruo mgbe ngwụcha nkịta ahụ ji akwa! Nke a ga - enyere aka izere ọdachi na nsogbu na - adịghị mma maka nkịta ya na ndị ọzọ.
N'ime ya, onye na-emepụta na-egosi ihe mejupụtara nke ụzọ eji tinye ya. Ọ bụrụ na ọ banye n'ime ahụ nwatakịrị ma ọ bụ nkịta n'onwe ya (ọ bụrụ na ọ na-eme ma na-adọta akwa olu), ọ na-egosi ngwọta nke ndị dọkịta na ndị na-agwọ ọrịa kwesịrị iji.
Ọzọkwa, ntụziaka na-ekwu maka nkịta nkịta ahụ nwere ike iji. Ngwá ọ bụla nwere ọgwụ ọjọọ. Jide n'aka na ị gụọ akụkụ a!
Nhọrọ ha zuru oke, mana ọ ka mma ịnye mmasị na ụlọ ọrụ a ma ama. Chetakwa - "ezi adịghị eme ọnụ"! Ọnụ ala dị ala nwere ike ịmepụta ihe na-adịghị ize ndụ. Ndị Veterinarian na-atụ aro ngwaahịa sitere na ndị na-emepụta ihe na Russia na Europe.
onye na-emepụta ihe - nye ụdị mmasị ị mara;
nyocha - wepụta oge gị ma jụọ ndị enyi gị, ndị na-ere ahịa anụ ụlọ ma ọ bụ Intanet;
akwa nha na onye ọ bu n'obi - ndi okenye, umu ndi ozo, ndi na-adighi ike;
ọnụahịa - echekwala na ahụike nke gị na-azụ anụ.
Ihe ndị a ma ama na ndị a ma ama:
Kwadoro. Ndị na-agwọ ọrịa na-atụle ngwongwo a ka ọ bụrụ ụzọ kacha mma maka nkịta megide ọrịa nje na-aṅụ ọbara, tinyere akọrọ. Na ngwugwu bụ weghachite. Ihe dị na ya bụ nguzo mmiri, ọ bara uru maka ndị nkịta na-eduga ndụ ndụ na ọdịdị. Oge 8 ọnwa.
Ọ na-emetụta ọ bụghị naanị ụmụ ahụhụ na-eto eto, kamakwa na larvae. Ahịa si 1.5 ruo 2,5,000 rubles.
Obi. Ihe dị iche iche nke ihe na-arụsi ọrụ ike na ngwugwu bụ na ọ na-amalite igbu ụmụ ahụhụ tupu ọnyà. Ikwenye nke ngwugwu megide fleas na jaws bụ ọnwa 5, megide akọrọ - ọnwa 2.5 nke na-eyi mgbe niile.
A na-etinye ya na nkịta mgbe ụbọchị 10 nke ọgwụ mgbochi parasitic shampoo. A na-agbagha ya na ụmụ nwa nwa ruo ọnwa isii, ime, agba umunwanyi ma adịghị ike ma ọ bụ na-arịa ọrịa ụmụ anụmanụ. Ọnụ site na 300 ruo 500 rubles.
Ị na-ebu nkịta nkịta, gbalịa ka ị ghara ịhapụ ya n'ihu gị ruo ọtụtụ awa. N'oge a, mmeghachi omume nwere ike ịkpata - nkịta nwere ike ịda, nchegbu, ọ nwere ike iyi ọkụ ọkụ.
A naghị atụ aro ka ị jiri olu akwa ahụ mgbe niile. Jiri naanị ma ọ bụrụ na enwere ike ibute ọrịa.
Ejila ihe ndị ọzọ na-eme nje na-emekọ ihe.
Mgbe ọgwụgwọ antiparasitic nke nkịta ahụ, echefula banyere ya. E kwesịkwara ịhazi ya.
Mgbe ị na-elekọta anụ ụlọ gị, cheta na ahụike ya bụ ahụike na nchekwa nke ezinụlọ gị.
N'ikpeazụ, anyị na-echetara gị nyochaa vidio nke collar nke sitere na fleas na akọrọ maka nkịta: